Baaris la xiriirta culuunta isu galmoodka bulshada Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laba ruux oo sariir wada saaran. sawir: Adam Wrafter/SvD/TT
Baaris la xiriirta culuunta isu galmoodka bulshada Sweden
"Dareenka galmadu waa mid noloshayada oo dhan nala socda"
La cusbooneeyay måndag 4 september 2017 kl 14.37
La daabacay måndag 4 september 2017 kl 09.05
Hayadda caafimaadka bulshada ayaa maanta u kala diri doonta foomam dadyoow gaarsii-san 50 000 oo ruux oo laga dhex xushay bulshada Sweden.
-Cilmi baaristan ayaa noqon doonta mid wax lagaga ogaado dhammaan arrimmaha ku saab-san galmada, taranka iyo xaqa loo leeyahay. Waa mid ku cusub in dhammaan arrimmahaa baaris keliya lagu wada keeno, sida ay sheegtay Louse Mannheimer, madaxa laanta caafimaadka iyo galmada ee hayadda caafimaadka bulshada oo wareeysi ay la yeelatay laanta idaacadda ee P1 Morgon.
-Sidaa daraadeed ayuu xiise ballaaran ugu lee yahay, sida ay sheegtay waxaana laga filayaa natiijooyin na xiise geliya.
Baaristan ayaa ku wajahan galmada iyo taranka bulshada Sweden ku dhaqan. Goolka laga leeyahay wuxuu yahay sidii baaris loogu sameeyn lahaa xaaladda caafimaad ee bulshada iyada oo lala xiriirineyo galmada iyo dhalista.
Su'aalaha wax laga waydiin doona bulshada ayey ka mid yihiin inuu qofku u furan yahay galmadiisa, sidoo kale inuu/inay isticmaasho qalabka galmada.
Cilmi-baaristan ayay dadka qaarkii u fahmi karaan in aanay ahayn dawladdu inay faraha la gasho arrimmo qofka u gaar ah iyo howlaha sariista dusheeda lagu sameeyo. Maxaad middaa ka oranaysaa?
-Tallaabadan waxay la xiriirtaa caafimaadka iyo sidii looga hor tegi lahaa caafimaad darrada. Waxaannu og-soonnahey in galmadu ey lug ku leedahay xoogga, kufsiga jir-dilka. Waxaa ka yimaada natiijooyin badan oo ay waajib nagu tahay inaannu wax ka ogaanno sidii aannu aqoon uga heli lahayn aannu ka tallaaba qaadi karno. Haddii kale waxaa inta badan laga hadlaa fikirka laga qabo.
-Sidaa daraadeed waxaa loo baahannahey in xaqiiqda la ogaado, sida ay sheegtay.
Louse Mannheimer, madaxa laanta caafimaadka iyo galmada ee hayadda caafimaadka bulshada.
Foomka oo ey ku yaalaan su’aallo kontameeyo, lixdameeyo kor u gaareya iyo su’aalaha qaarkood oo kuwa dheeri ah ka dhalneyaan ayey ka mid yihiin: Goortii kuugu horreeysay oo aad galmo sameeyso, goortii kuugu dambeeysay, inaad galmada u isticmaasho alaabada caagadaha iyo waxyaabo la mid ah. Su’aashuse waxay tahay, maxaa looga baahan yahay oo ay soo kordhineyaan su’aalaha noocaa ihi?
-Maadaama dhammaan waxyaabahaasi lagu saleeynayo caafimaadka. Sida ay noo saameeysay. Sida ay wanaagga nolosheena u saameeysay. Caafimaadkayaga siday u saameeysay. Waa xiriirka noocaasi ah midka aannu baadi-goobka ugu jirno. Shakhsi ahaan macne kuma fadhido, laakiin wuxuu xiisahayagu yahay koolka ay koox isku mid noqoto, iyo saameeynta ay ku leedahay, sida ay sheegtay.
Inkasta oo ay shuruucda waddanku qoreyaan inuu ruux walba u madax bannaan yahay oogadiisa, cida uu dooneyo inuu la noolaado, u galmoodo, goorta uu doonayo ama goorta aannu doonayn, ayay haddana jiraan dadyoow aan xorriyad u laheyn middaa oo ey cid kale go’aamisaa. Waana middaa midda aannu dooneyno inaannu wax ka ogaanno, sida ay sheegtay Louse Mannheimer, madaxa laanta caafimaadka iyo galmada ee hayadda caafimaadka bulshada.
Natiijada baaristan ayaa la fileyaa inay soo bixi doonto sannadka 2019, maadaama wakhti loo baahan yahay si loo helo cilmi baaris tayo leh. Iyada oo natiijada ka soo baxdaana lagala kaashan doono hayadda adeegga bulshada, hayadaha caafimaadka iyo iskuullada sidii caafimaadka dar-yeelkiisa wax looga qaban lahaa, sida ay sheegtay Louse Mannheimer, madaxa laanta caafimaadka iyo galmada ee hayadda caafimaadka bulshada.
Foomkan haddii aad hesho ma ka jawaabi lahayd?